म जापानमा रेष्टुरेण्टको शौचालय पनि सफा गर्थे, म त्यहाँ कलाकार गौरी मल्ल थिइन…. (भिडियो हेर्नुस्) – Khabar Patrika Np
म जापानमा रेष्टुरेण्टको शौचालय पनि सफा गर्थे, म त्यहाँ कलाकार गौरी मल्ल थिइन…. (भिडियो हेर्नुस्)
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, बैशाख २४, २०७८ समय: १७:४१:१०
उनले त्यहाँ आफनो एउटा साथी बनेको बिरालोको पनि कुरा गरेकी छन् । नेपालमा अभिनेत्रीका रुपमा ठूलो नाम कमाएकी गौरीलाई जापानको टोकियोमा कसैले पनि चिन्दैनथ्यो । तर त्यो पल उनका लागि विशेष थियो । उनी आफैले आफुलाई चिन्ने मौका पाएकी थिइन् । उनी भन्छिन् कलाकार गौरी मल्ल मैले पाएको परिचय होइन, त्यो मेरो कामले दिएको परिचय हो